Cnaps, Jirama, OMH: Samy tsy manana Tale jeneraly
jeudi, 07 novembre 2019 12:58
Nesorina tamin’ny toerany nandritra ny filankevitry ny minisitra tamin’ny 20 martsa 2019 ny Tale jeneralin’ny Cnaps, Arizaka Rabekoto Raoul. Tsy mbola nisy fanendrena izay solony, fa mpitantan-draharaha vonjimaika no amperinasa tao anatin’izay fito volana izay.
Nofoanana nandritra ny filankevitry ny minisitra tamin’ny 14 aogositra 2019 ny fanendrena ny Tale jeneralin’ny Jirama, Olivier Jaomiary. Tsy mbola voatendry izay solony efa ho telo volana aty aoriana.
Nametra-pialana tsy Tale jeneralin’ny Ofisy Malagasy momba ny Akoran'afo (OMH) i Rajaonarivelo Lauren tamin’ny talata 29 oktobra 2019. Neken’ny filankevitry ny minisitra tamin’ny 30 oktobra 2019 ny fametraham-pialany. Banga io toerana io mandrampiandry ny fanendrena izay ho solony.